मेक्सिको र स्वीडेनबीचको खेल शुरु, कसले मार्ला बाजी ? - Everest Dainik - News from Nepal
मेक्सिको र स्वीडेनबीचको खेल शुरु, कसले मार्ला बाजी ?
मस्को । रुसमा जारी विश्वकप फुटबलअन्तर्गत समूह ‘एफ’ को खेलमा मेक्सिको र स्वीडेनबीचको खेल शुरु भएको छ ।
नेपाली समय अनुसार खेल इक्टेरिनबर्ग एरिनामा ७.४५ बजेबाट शुरु भएको छ । समूह ‘एफ’ को जित हात पार्दै मेक्सिको समूह विजेता बन्ने लक्ष्यमा मैदानमा उत्रिएको छ । यसअघिको दुबै खेलमा जित हात पारेको मेक्सिको समूहको अन्तिम खेलमा पनि जित हात पार्ने दाउँमा छ ।
यता, स्वीडेन पनि मेक्सिकोलाई पराजित गर्दै नकआउट चरणमा पुग्ने लक्ष्यमा छ । यसअघि समूह चरणको दुई खेलमा मेक्सिको जित हात पार्दै ६ अंक बनाएको छ ।
दुई खेलमध्ये १ खेलमा जित र एक खेलमा हार ब्यहोरेको स्वीडेनको ३ अंक रहेको छ । मेक्सिको र स्वीडेनको यसअघि ९ खेलमा भेट भएको छ । जसमा ४ खेल स्वीडेनले जितेको छ । मेक्सिकोले २ खेल जितेको छ भने ३ खेलमा मेक्सिको र स्वीडेनले बराबरी खेलेका छन् ।
याे पनि पढ्नुस स्वीडेन र स्वीट्जरल्याण्डबीचको खेल पहिलो हाफ बराबरी
ट्याग्स: Mecxico vs Sweden, world Cup 2018